Xirxirida & Saadka - Pandawill Technology Co., Ltd.
At Pandawill, dhammaan looxyadu waxay ku xirnaan doonaan jawaano hufan, oo hufan iyada oo aan loo sii deyn waxyaabaha ku jira kuleyl kale oo dheeraad ah, iyo qaab loo furo baakadaha iyada oo aan wax culeys jireed ah lagu saarin qaanadaha gudaha ku jira.
Faa'iidooyin dhowr ah ayaa ku jira habkan xirxira:
✓Baakaduhu way cad yihiin sidaa darteedna waa suurtagal in la kormeero ama loo fiirsho sabuurad si faahfaahsan iyada oo aan la furin baakadda isla markaana looxyada lagu sii adkeeyo ama loo bandhigin wasakhda iyo huurka.
✓Boorsooyinka waxaa si fudud loogu furi karaa maqas ama daab halkii laga jeexi lahaa, oo mar haddii faaruqinta la jajabiyo, baakaduhu way kala furfurmayaan oo looxyada waa la qaadi karaa iyadoon qatar u aheyn dib u dhaca ama waxyeelo.
✓Boorsooyinka ay ku jiraan baalasha ayaa dib loo isticmaali karaa si loo xiro tirada qeyb ahaan, sidaas darteedna loo kordhiyo nolosha shelf ee waxyaabaha ku jira
✓Qaabkan baakadu uma baahna wax kuleyl ah maadaama bacaha ay xiran yihiin induction sidaas darteedna looxyadu uma hoggaansamayaan hannaanka kuleylka aan loo baahnayn.
✓Iyadoo la raacayo ballanqaadyadeena deegaanka ee ISO14001, baakadaha ayaa dib loo isticmaali karaa, loo celin karaa ama 100% dib loo isticmaali karaa.
Waxaa jira fursado badan oo rar ah oo adiga kugu habboon waxayna kuxirantahay qiimaha, waqtiga iyo mugga.
By Express: hadaan nahay dhoof weyn, waxaan la sameynay xiriir wanaagsan shirkadaha xawaaladaha. Kuwani badanaa loogu talagalay mugga yar, alaabada waqtiga muhiimka ah. Ka sokow koontadayada maraakiibta, waxaan ku rari karnaa koontadaada.
Diyaaraduhu waa dhaqaale ahaan marka la barbardhigo xawaaraha xawaaraha dheer waana ka dheereeya badda. Caadi ahaan alaabada mugga dhexdhexaadka ah.
Caadi ahaan soosaarka mugga weyn iyo waqtiga hogaamintu ma aha mid deg deg ah. Waana habka ugu kharashka badan ee wax loo geeyo.